कैलाली अब वामपन्थीको लाल किल्ला हो, म भारी मतले जित्छु: लेखराज भट्ट - Everest Dainik - News from Nepal
कैलाली अब वामपन्थीको लाल किल्ला हो, म भारी मतले जित्छु: लेखराज भट्ट
'वाम गठबन्धनभित्र कुनै आन्तरिक असन्तुष्टी छैन्'
४५ वर्षदेखि निरन्तर वामपन्थी अान्दाेलनमा सक्रिय र जनयुद्धभन्दा अघिदेखि माअाेवादी राजनीतिमा क्रियाशिल माओवादी केन्द्रका नेता लेखराज भट्ट बामगठबबाट कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ का उम्मेदवार बनेका छन् । प्रदेश नम्बर ७ का इन्चार्ज समेत रहेका भट्टलाई माओवादीभित्र सुदुरपश्चिमका खम्बाका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । सुदुरपश्चिमको भू–राजनीति, इतिहास,भाषा, संकृतिको समेत सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेका भट्टको चुनावी एजेण्डा र समग्र कैलालीको चुनावी माहोलबारे एभरेष्टदैनिका लागि रघुनाथ बजगाँईँले लिएको अन्तरवार्ता:
कैलालीको चुनावी माहोल कस्तो छ ?
अहिले गरम भएको छ । पछिल्लो केहि दिनदेखि वामगठबन्धनको चुनावी गतिविधिले कैलाली पुरै तातेको छ । जनताको सक्रिय सहभागिता र चासोले राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवार तथा नेता कार्यक्रतालाई यसै बस्न दिएका छैनन । वाम तालमेलप्रति जनताको विश्वास पनि बढेको छ ।
लोकतान्त्रिक गठबन्धन देखिएका छैनन् र ?
उनीहरुका गतिविधि खास देखिएका छैनन् तर बिभिन्न क्लवमार्फत आर्थिक चलखेल गरिरहेका छन भन्ने सुन्छु । उनीहरु भित्रि रुपमा आर्थिक प्रलोभनमा पारेर चुनावी अभियानमा लागेका छन् । मतदातालाई पैसा दिने जस्ता कार्यको प्रतिवाद गर्न जनतालाई आव्हान गरिरहेका छौँ ।
तपाँई पनि कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ को उम्मेदवार, मतदाता के भन्छन ?
याे पनि पढ्नुस प्रचण्डसँगको भेटपछि राष्ट्रपति अध्यादेश स्वीकृत गर्ने मुडमा
मतदाता कम्तिमा प्रश्न गर्न सक्ने भएका छन् । उनीहरु आफैँले विकासका कुरा उठाएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्छन् । खानेपानी, सडक बिद्युत, उर्जा, उद्योगधन्दा, पर्यटन जस्ता बिषयमा के गर्ने हो भनेर सोध्छन् । चुनाव जितेपछि के गर्छाै ? तपाँईका एजेण्डा के हुन ? काम कसरी गछौँ ? तपाँईलाई जिताएर के पाउछौँ भन्छन ।
भनेपछि जवाफ दिन गाह्रो पर्यो होला !
हैन, झन सजिलो भयो नी, मैले आफ्ना एजेण्डा प्रष्टसंग राखेको छु । जव म राजनीतिमा लागे त्यतिबेला देखि नै यहाँको विकासमा मेरो मुख्य चासो रह्यो । जनयुद्धमार्फत पनि सुदुरपश्चिमको विकासका कुरा उठायौँ । शान्ति प्रक्रियामा आएपनि झन ससक्त बनाउन भुमीका खेलेकै छु । सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग जस्ता बिषयमा रोल खेलियो । अब त्यसको पुर्णता र स्तरउन्नतीको बिषय छ । म त्यो पुरा गर्छु । दोधारा चाँदनीको सुखाबन्दरगाहका बिषयमा भारतसंग बिभिन्न चरणमा छलफल भएका छन् । म २०६४ को निर्वाचन पछि श्रम मन्त्री हुँदा पनि यो बिषयमा धेरै कुरा भएका थिए । कृषि सडक कालोपत्रे गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छु । पर्यटन विकास, उद्योगधन्दाको विकास, स्थानीयस्तरमै रोजगारीका संभावनाको खोजी गर्ने र स्वरोजगारमृुलक कार्यक्रम ल्याउने एजेण्डा प्रस्तुत गरेको छु ।
याे पनि पढ्नुस कञ्चनपुरको समग्र विकास मेरो परिकल्पना : बिना
यहि नै हो मेरो जित्ने आधार भन्ने होला थप प्रश्न गरौँ भने,
हजुर, भनेका कुरा पुरा गर्छु । मैले राजनीतिलाई सेवाका रुपमा लिएको छु । कतिपयले राजनीतिलाई व्यापार जस्तो बनाएका छन् त्यसलाई रोक्न र काम गर्न सक्षम नेतृत्व छान्न जनता अब चुक्दैनन । सबैको साझा प्रतिनिधि भएर काम गर्ने मेरो प्रतिवद्धताले विपक्षी दलका कार्यकर्ता र त्यो लाममा रहेका भनिएका मतदाताहरुले पनि मलाई विस्वास गरेकाले मेरो पक्षको माहोल धेरै नै बलियो छ ।
मिठा सपना देखाउने तर पुरा गर्ने प्रष्ट आधार नहुने चुनावी प्रतिवद्धता विगतमा पनि देखियो, त्यहि नियति अब दोहोरिन्न भन्ने के ग्यारेण्टी ?
हामीले संयुक्त घोषणापत्रमा प्रष्ट भनेका छौ । कति समयमा के गर्ने भनेर । विगतमा राजनीतिक संक्रमण भएकैले सबैले भनेजस्तो गर्न पाएनन । अहिले हामीले दुई तिहाई बहुमत ल्याउने संकल्प सहित वाम तालमेल गरेका छौँ । हाम्रो दुई तिहाई आउने पष्ट आधार पनि देखिएको छ । स्थिर सरकार बन्छ । ५ बर्षसम्म वामपन्थी सरकार हुँदा मैले यतिबेला गरेका बाचा पुरा गर्न असहज होला जस्तो लाग्दैन । पहिले पो यो भयो त्यो भन्न पाईन्थ्यो होला रे अब त्यो छुट कसैले पाउँदैनन । गरेका बाचा पुरा गर्ने आधार तय हुन्छ । घोषित एजेण्डा अनुसार जे गर्छु भनेको छु त्यो भन्दा बढि गर्छु, कम हुँदैन ।
याे पनि पढ्नुस प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवाबीच वार्ता चलिरहँदा अाेली पनि पुगे वालुवाटार
वाम गठबन्धनभित्र पनि आन्तरिक असन्तुष्टी देखिएका छन नी !
अलि अलि हुनु स्वभाविक हो तर हामी छलफल गरेर त्यो टुङ्ग्याउछौँ । कैलालीको कुरा गर्ने हो भने यहाँ खास असन्तुष्टी छैन् । ७ नम्बर प्रदेश संभावनाको खानी नै हो । तै पनि पछि पर्दै आएको छ । यसैको विकासका लागि वाम तालमेल गरेका हौँ । याे अभियानका क्रममा आएको अलि अलि असन्तुष्टी खास समस्या होईन्न ।
चुनावी आँकलन कस्तो छ यति भोटले जित्छु भन्ने त्यस्तो के छ ?
स्थानीय तहको चुनावलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि वाम गठबन्धनका कैलालीका सबै उम्मेदवारले जित्छन । यत्तिउत्ति भनिरहनु परेन भारी मतले जित्छौँ, म पनि ढुक्कले जित्छु ।
ट्याग्स: kailali, Left Unity, Lekha Raj Bhatt, maoist center, raghunath bajagain
सुशान्तपछि अर्का अभिनेता मृत भेटिए, हत्या कि आत्महत्या ?